2020 SaaS Churn Rate Zviverengero | Martech Zone
Chitatu, November 11, 2020 China, April 1, 2021 Jafar Sadhik
Isu tese takanzwa nezveSalesforce, Hubspot, kana MailChimp. Ivo vakatangisa zvechokwadi nguva yekuwedzera SaaS kukura. SaaS kana Software-se-se-sevhisi, kungoisa chete, ndipo apo vashandisi vanowana iyo software pane kunyorera hwaro. Iine zvakwakanakira zvakawanda sekuchengeteka, shoma nzvimbo yekuchengetera, kuchinjika, kuwanikwa pakati pevamwe, SaaS mhando dzakaratidza zvakabereka zvakanyanya kuti mabhizinesi akure kuvandudza kugutsikana kwevatengi uye ruzivo rwevatengi.
Kushandisa software kuchakura pa10.5% muna2020, mazhinji acho achange achityairwa SaaS. SaaS uye gore mashandiro akatowana gwinyiso nekuda kweCovid-19 ine 57% yemakambani ari kuronga kuwedzera mashandiro avo.
Gartner uye Flexera
SaaS kukura kunogona kutsanangurwa nekuda kweakakura mhedzisiro inowanikwa kuburikidza nekushandisa mukushambadzira, kubudirira kwevatengi, kutengesa, uye kuchengetedza. SaaS mabhizinesi anogona kufananidzwa nemiti. Kurarama, kupa, kuchinja, kukura, uye kondirakiti kana nguva yasvika. Uye sezvo bhizinesi richikura, vatengi vanouyawo voenda. Aya mahedheni emitengo anogona kukanganisa bhizinesi rako uye nzvimbo kushomeka pane kuwedzera kwemusika uye kukura.
SaaS Churn Rate: Yakatsanangurwa
SaaS churn mitengo, ingoisa, uye uratidze mwero unogumisirwa / kubviswa kwavo kunyoreswa nevatengi vako varipo munguva yakatarwa.
Icho chiratidzo chekuti mari yakashandiswa sei mushandisi mune yako yekupa maererano nekugona, chinangwa, mitengo, uye kuendesa. Churn rate inosarudza pakati pezvimwe zvinhu, kuti yako chigadzirwa chaita nemutengi.
Uye kune SaaS kukura, kukura kwehuwandu (nyowani nyowani-kumusoro, kukwirisa, nezvimwewo) inofanirwa kugara ichidarika churn mwero (yakadzimwa, vakarasika vanyoreri).
Sezvo SaaS inofungidzirwa kukura pasirese, kuchengetedzwa kwevatengi uye kubudirira kwevatengi kwakakosha ku deredza SaaS churn mitengo. Sezvo kugutsikana kwevatengi iri imwe yematanho makuru pakati pekambani yakabudirira nevamwe, ruzivo rwevatengi rwave chinhu chakakosha pakubudirira kwebhizimusi uye kukura kwekambani.
Kuti uchengetedze iwe uchivandudzwa nemafambiro azvino uye dzidza zvekudzivisa, isu takanyora runyorwa rwe10 SaaS Churn Statistics ye2020.
Maitiro Ekuverenga Churn Rate
Zvinogona kunzwika zviri nyore, asi kuverenga Churn Rate yeSoftware seSevhisi, pane mamwe ma nuances. Zvakare, Churn Rate ndiyo nhamba yevatengi yakasiya yakakamurwa nenhamba yevatengi pakutanga kwenguva yakayerwa… yakaverengwa seperesenti. Heino iyo Churn Rate fomura:
Zvinhu zvekuchengeta mupfungwa kana uchiverenga Churn:
Iwe unofanirwa kusabvisa vese vatengi vatsva kubva pane izvi kuverenga Churn ingori fananidzo yeakadzima vs. varipo vatengi.
Iwe unofanirwa kuverenga uchishandisa iyo yakafanana nguva, asi izvo zvinogona kuve zvinonyengera. Zvichida vamwe vatengi vane zvibvumirano zvakasiyana zvehurefu, marongero akasiyana ekubhadharisa, kana kupihwa ... ungangoda kukamura kuverenga kuverengerwa pane yega yega kuti uone kana izvo zvinokanganisa zvichikanganisa.
Iwe unofanirwa kuwedzera chidimbu vatengi vako nechisanganiswa chechigadzirwa kana pasuru iyo yavakanyorera. Izvi zvinokupa iwe zvakadzama nezvekuti zvakanaka sei yako mitengo kana chigadzirwa mapakeji kukanganisa churn.
Iwe unofanirwa kuverenga yako churn rate zvichibva pane kwayakatengesa uye chii mutengo wekuwana uri. Iwe unogona kuona kuti iyo churn mwero wako mukuru wekutora wakabhadharisa mishandirapamwe inogona kuita kuti iyo yekutengesa nzira isagadzikane kune hutano hwekambani yako.
Iwe unofanirwa kuverenga churn nguva nenguva kuti uone maitiro ako pane churn uye kana iri kuwedzera (kushomeka kwekuchengetedza) kana kugadzirisa (vatengi kuvimbika) nekufamba kwenguva.
Churn hachisi chinhu chakaipa nguva dzose… makambani mazhinji eSawaS anoshandisa churn kutsiva vanyori vasina mari nevane pundutso. Kunyangwe iwe uchigona kuve neyakaipa churn mwero mune aya mamiriro, bhizinesi rako rinozove rinobatsira mukufamba kwenguva. Izvi zvinozivikanwa se Net Negative Mwedzi Unodzokororwa Revenue (MRR) Churn, apo yako yekuwedzera mari kune vatsva uye varipo vatengi iri kuwanda mari yauri kurasikirwa kuburikidza nekudzikisira uye kukanzura.
10 SaaS Churn Statistics ye2020
SaaS churn uye Contract nguva - SaaS makambani ane zvibvumirano nevatengi apfuura makore maviri kana anopfuura angangodaro ataure yakaderera churn mitengo. Zvibvumirano zvakareba, zvingave zvegore kana kupfuura, zvakatungamira kudzikisa churn mitengo nemwedzi-mwedzi kunyorera mamodheru ane huwandu hwechurn hweinenge 2%. Izvi zvinogona kuverengerwa kuvimbika, ruzivo rwevashandisi, uye kubudirira kwechigadzirwa pakati pevamwe.
Churn Rate uye Kukura Mwero - Makambani ekuderera-ekutanga uye ekutanga-kumusoro anowanzo kuve nemitengo yepamusoro yechurn. Mazhinji makambani ekudzikira-mashoma, angangoita makumi mana nemasere muzana, anoona churn yakakwira kupfuura makambani ekukura kumusoro Izvi zvinogona kuverengerwa kuchigadzirwa, kushambadzira kuedza, kana maitiro evatengi ekuita.
Wepakati weMedan Churn Rate - Kune mabhizinesi anoita isingasviki madhora gumi emadhora pagore, 10% ndiyo yepakati pagore SaaS churn mwero. Medium SaaS makambani anorasikirwa neangangoita 20% kusvika 5% muzana yemari yekukwira gore rega. Izvi zvinoreva, zvinopfuura zvikamu zviviri kubva muzvitatu zvemakambani eSawaS aive ne7% kana anopfuura churn mitengo mugore. Zvakare, 5-5% inoonekwa se 'inogamuchirwa churn' zvinoenderana nesaizi yesangano.
SaaS Churn Rate uye Kutengesa - Kutengesa uye hukama hwevatengi ndiyo hwaro hwekuchengetedza mutengi uye chuck churn. Zvinoenderana neKushambadziraCharts, nzira dzekutengesa chiteshi dzine huwandu hwakanyanya pa17% nepo munda wekutengesa wepakati pa11% kusvika 8%. Mukati mekutengesa mune churn mwero we14%. Izvi zvakare zvasimbisazve kukosha kwehukama hwevatengi uye zvakaenzanisirwa kuedza mukuchengetedza uye kuwedzera kuvimba kwevatengi.
Mobile Mapurogiramu uye SaaS Churn Rate - Iyo mwero wekuchengetwa kweyemwedzi kuburikidza nhare mbozha pa41.5% chizaruro. Iyi ingangoita kakapetwa kanokwana kupfuura chiitiko chevashandisi nemawebhu interface maererano neReply.io. Inopindirana nharembozha maapplication ayo anotarisisa pakuburitswa kwechigadzirwa akabatsira kune ino yakaderedzwa churn rate rate.
Vatengi Sevhisi uye Churn Rate - Kunyange 47% ichikurudzira bhizinesi kana ichipa yakanaka vatengi uye mhinduro, 42% yakasiya SaaS kunyorera nekuda kwekushomeka kwevatengi. Vashandisi izvozvi vanoda kuti chiitiko chive icho chinobatsira kubudirira kwevatengi. Iko kune kudikanwa kwekukwiridzira kune kwevatengi kubudirira kudzikisa churn mitengo.
Nhamba yeVatengi uye Churn Mitengo - Anenge 69% emakambani eSawaS anotora huwandu hwevatengi kuverengera vachiyera churn mitengo. 62% vanoshandisa mari seyadhi yavo yekutanga kuti vanzwisise huwandu hwemari. Kunze kweizvi, marezinesi evashandisi zvakare imwe nzira yekuyera churn mitengo.
Kutsva Kwevatengi Kuwana uye Churn Mitengo - Makambani ari kukoshesa kutsvaga kwevatengi kutsva kuti varambe vari pamusoro uye nekuvandudza manhamba. Chete 59% chiyero chiripo chekuvandudzwa kwevatengi uye kugutsikana sechinhu chakakosha. Uku kushomeka kwekubudirira kwevatengi kunopa kune yakakwira churn mitengo. Kutengesa nekutengesa muchinjikwa kune mukana wakakura wekuwedzera bhizinesi.
Iyo SaaS Inokurumidza Ratio - Mazhinji SaaS ari kukura nekukurumidza ane avhareji Kurumidza Ratio ye3.9.
Yakawedzera Churn mitengo - Kunyange 34% yemakambani akaona yavo churn mitengo ichiderera, 30% yakashuma yavo churn mitengo yawedzera. Izvo zvinogona zvakare kucherechedzwa kuti mazhinji emakambani anoratidzira yakakwira churn mitengo inogadzira mari isingasviki madhora gumi emamiriyoni.
Pazasi-mutsara: Gadzira yako SaaS tsvimbo
Iko kune kudikanwa kwekuziva kuti kuchengetedzwa kwevatengi, kuvimbika, uye kubudirira ndiwo makiyi ekukura kwebhizinesi uye budiriro. Nekuita pane ruzivo rwevatengi pakutanga, mumwe anogona kudzikisa churn mitengo. Izvo zvakare zvakakosha kuti ubatsire vatengi vako kuita neako SaaS kuitira kuti vagowana ruzivo rwakakosha uye vagamuchirewo mhinduro yavo yekuvandudza ruzivo rwevashandisi uye dhizaini yezvigadzirwa. Kugadziriswa kwekugadzirisa matambudziko evashandisi uye kuyera mashandisiro kunogona kubatsira kudzikisa mwero wechurn uye kukurudzira kukura.
Tags: verenga churn ratekukoshesa kuverengasaassaas churnsaas churn mitengosaas churn nhambaskas inokurumidza chiyero
Anotengesa zvemadhijitari anodakadza ane ruzivo rwakakwana muminda senge SaaS maturusi, CX, churn manhamba, nezvimwe. Kare, aishandira mabasa epamusoro senge SportsKeeda naNeil Patel Dhijitari India, uye parizvino anoshanda ku SmartKarrot Inc. Anoda kuverenga mabhuku panguva yekuzorora. uye anoyemura zvikuru mabasa aAgatha Christie.